Puntland oo toogatay 21 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Puntland oo toogatay 21 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab
Maamul Goboleedka Puntland ayaa saaka dil toogasho ah ku fulisay danbiilayaal ka tarsan Al-shabaab, kuwaas oo horey Maxkamadda ciidamada qalabka sida ugu xukuntay dil.
GAALGACYO, Soomaaliya – Fagaare ku yaalla magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa saaka lagu toogtay 18 xubnood, oo ka tirsanaa Al-Shabaab, kuwaas oo lagu helay danbiyo dil oo ay dhowr iyo tobankii sano ee na weydaartay ay ku hayeen dadka indhaha u ah bulshasa ku dhaqan Mudug.
“Waxaan hadda ku fulinay Xukunkii Maxkamadeed 18-kii xukumane ee ahaa Shabakadii ugu waynayd Ururka Argagixisada Al-shabaab ee mudadii 13-ka sano sida arxan darrida ah ku laynayey Bulshada Magaalada Gaalkacyo”. Ayuu yiri Guduumiyaha Gobolka Mudug Sanyare.
Saddex kale waxaa lagu dilay Garowe halka magaaladda Qardho hal qof lagu toogtay, taasoo tirada guud ka dhigaysa 21 xubnood.
Inta la xasuusto, waa tiradii ugu badnayd abid ee xukunsanayaal Al-Shabaab ah oo hal goob lagu wada toogto taariikhda, waxayna taasi ku timid go’aan adag oo maamulka Puntland ka hirgaliyahy Magaalada Gaalkacyo.
Maxamed Cali Cuuke oo loo yaqannay ‘Jeeri’, Faysal Axmed Bashiir oo loo garan ogaa ‘Gujis’ iyo Maxamed Xaashi Mu’min ‘Abu-dayib’ oo hore looga qaaday waraysiyo ay ku qiranayaan in ay dileen dad masuuliyiin ah ayaa kamid ah horjoogayaasha saaka lagu toogtay Gaalkacyo.
Dhanka kale xarunta maamulka Puntland ee Garaowe, waxa saaka lagu toogtay laba xubnood oo ka tirsanaa Al-shabaab, kuwaas oo hore maxakamad ugu ridday xukun dil ah.
Puntland ayaa billowday ugarsi xooggan oo ka dhan ah, shabakadaha Al-Shabaab ee ku dhex jira shacabka waxayna dil-wadareedka saakay ay ku micneeyay howl billow ah.
Warar 26 June 2021 19:43